Pope Francis jụrụ Kadịnal na njem uka na Lourdes maka ekpere | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis jụrụ Kadịnal na njem njem na Lourdes maka ekpere
di Paolo Tescione - Ọgọstụ 26, 2020
Pope Francis kpọrọ Kadịnal Italiantali nke gara Lourdes na njem uka na Mọnde iji jụọ ya maka ekpere ya n'ụlọ arụsị maka onwe ya na "ihe kpatara edozi ụfọdụ ọnọdụ. "
Dabere na onye isi ụka Rome, Kadịnal Angelo De Donatis, Pope Francis kpọrọ ya n'isi ụtụtụ Ọgọstụ 24 tupu De Donatis apụ ụgbọ elu maka njem njem na Lourdes.
“Ọ gwara m ka m gọzie unu niile ma kpee ekpere maka ya. O siri ọnwụ na-ekpe ekpere ka ọnọdụ ụfọdụ dozie ma kwuo ka inyefee ya n'aka Nwanyị anyị,
De Donatis na-eduga njem uka diocesan na Lourdes mgbe ọ gbakere site na coronavirus n'oge opupu ihe ubi a. Ndị njem ala nsọ 185 ahụ gụnyere ndị ụkọchukwu 40 na ndị bishọp anọ, yana ọtụtụ ndị ọrụ ahụike nyere aka ịgwọ De Donatis mgbe ọ na-arịa ọrịa nje ahụ.
Kadịnal ahụ gwara EWTN News ọ kwenyere na njem a "bụ ihe ịrịba ama nke olile anya n'uzo doro anya".
Thebọchị anọ dị na Shrine bụ "ya mere, ịtọpụ, n'ọnọdụ nke precariousness, mmachi, ịchọpụtakwa ọmarịcha njem uka ọzọ", ka o kwuru, "yana inyefe Mary Immaculate, na-ewetara ya ọnọdụ ahụ dum na anyị na-enwe. "
De Donatis agbakeela kpamkpam site na COVID-19 mgbe ọ butere nje ahụ na mbubreyo March. Ọ nọrọ ụbọchị 11 na Gemelli Hospital na Rome tupu a hapụ ya ka ọ gwụchaa ụlọ.
Akwụkwọ mgbasa ozi ndị dayọsis kpọrọ ya "njem mbido nke oge oria a na-efe efe: njem ekele na inyefe n'aka Meri Mary, bụ onye sooro ma kpalie ekpere dayọsis ahụ kemgbe mbido mkpọchi ahụ".
Njem a na-agagharị na Lourdes bụ ọdịnala Diocese nke Rome na-eme kwa afọ. Ebe ọ bụ na mmadụ ole na ole nwere ike ịnọ na France afọ a, ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eme njem nsọ ga-adị ndụ na mgbasa ozi mmekọrịta, gụnyere peeji nke Vatican nke EWTN Facebook, maka ndị chọrọ "isonye" n'ụlọ. A ga-agbasa ngwugwu ikpeazụ nke njem a na telivishọn Italiantali.
Ihe ngosi a na - ebi ndu "ga - abụ ohere iji mee ka ndị na - enweghị ike ịnọ ebe ahụ gaa Grotto nke ngosipụta, ikekwe n'ihi na ha bụ ndị agadi ma ọ bụ na - arịa ọrịa, mana ndị ga - enwe ike ibi ndụ ahụmịhe a na mmekọrịta n'etiti ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi", ka Fr. Walter Insero si kwuo, onye nduzi nke nkwukọrịta nke Dayọsis Rome.
Onye nhazi njem ala nsọ, Fr. Remo Chiavarini, kwuru na "anyị nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji wepụta oge maka ekpere n'ebe ndị a pụrụiche dị nso n'ebe Onyenwe anyị nọ".
"Anyị nwere ike ịkele ya maka ichebe ndụ anyị, ma rịọkwa maka enyemaka na mkpa anyị niile, yana itinye ndị niile anyị hụrụ n'anya n'aka ya," ka ọ gara n'ihu. "Anyị na-enye obodo anyị ohere iji wusie ntụkwasị obi na olile anya ike, iji nwee nkasi obi ma nwee obi ike, itolite n'eziokwu nke ịdị n'otu".
N'oge akụkụ mbụ nke mgbochi nke Italy maka COVID-19, na tupu ibute nje a n'onwe ya, De Donatis kwuru na kwa ụbọchị na-aga kwa ụbọchị iji kwụsị ọrịa a site na Sanctuary nke Divino Amore na Rome.
Abọchị ole na ole tupu a hapụ ya n'ụlọ ọgwụ, kadinal ahụ degara ndị Katọlik nke Rome ozi iji mesie ha obi ike na ọnọdụ ya adịghị njọ.
"Ekele m niile na-agara ndị dọkịta, ndị nọọsụ na ndị ọrụ ahụike niile nke golọ Ọgwụ Agostino Gemelli bụ ndị na-elekọta m na ọtụtụ ndị ọrịa ndị ọzọ nwere ikike dị ukwuu ma na-egosi mmadụ miri emi, nke sitere n'echiche nke Ezi Sameria ahụ", ka o dere.
Diocese nke Rome na-ahazikwa njem nsọ gaa Ala Nsọ na Fatima na ọnwa Septemba na Ọktọba